Etu ị ga - esi mee SEO dị na mpaghara na mmefu ego | Martech Zone
N'ime oge, SEO na-esiwanye ike ma sie ike karị, mana nke ahụ ọ ga-abụrịrị na ọ dị oke ọnụ? Ọ bụghị ụlọ ọrụ niile chọrọ ọrụ SEO sitere na Ntanetị ma ọ bụ metụtara IT. N'ezie, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ obere ụlọ ọrụ ndị na-elekọta otu mpaghara ala. Ndị a chọrọ SEO mpaghara kama ọdịnala, SEO mba.
Ulo oru di iche-iche na ndi mmadu - ndi eze, ndi oru mmanu ulo, ulo ahia, ulo ahia, enweghi ezigbo mkpa ichota nke oma na nyocha nke uwa ka ndi mmadu bia site na mpaghara ozo, ma obu na obodo ha. Naanị ihe ha ga-eme bụ ịpụta n'elu mgbe mmadụ lere anya "ndị dọkịta ezé na Seattle" ma ọ bụ "ndị ọkpọ plị na Madison." Nke ahụ bụ ebe SEO mpaghara na-abata.
“Dentists seattle wa” laghachi a 7-mkpọ nke ebe nrụọrụ weebụ dabeere na ọnọdụ
Ọtụtụ kemgbe edere banyere SEO mpaghara na mkpa ọ dị na ahịa na-arịwanye elu nke Google. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ na-achọpụta na SEO mpaghara nwere ike ime n'ezie na obere ụgwọ; na obere mmefu etinyeziri na SEO mpaghara nwere ike gbanwee isi ROI.
Mpaghara SEO kwesịrị ịdị ọnụ ala karịa ka ọ na-adịkarị na SEO nchịkọta nke ụlọ ọrụ na-erekarị. Nke a bụ ihe kpatara ya:
1. Nsọ Asọ
Site na ngwugwu SEO zuru ụwa ọnụ / mba, ị doro anya na ị na-asọmpi na ọtụtụ puku weebụsaịtị ndị ọzọ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa) nke na-ere site na nnukwu mmefu ego iji nweta ọkwa dị elu. Abịa na SEO mpaghara, asọmpi a na-ebelata ozugbo na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụlọ ọrụ na weebụsaịtị. Nke a bụ n'ihi na Keywords ị lekwasịrị anya bụrụ “ebe akọwapụtara nke ọma,” nke bụ nnukwu uru (ekele na akụkụ nke ọgụgụ isi Google).
Kama ịsọ mpi na weebụsaịtị gafee mba ma ọ bụ ụwa niile, ugbu a, ị na-agbaso naanị azụmaahịa ole na ole. Ohere dị mma na ọ bụghị ọtụtụ n'ime ha nwere enyemaka SEO ọkachamara, na-ahapụ ọnụ ụzọ mepere emepe ka ị weghara nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
2. Mfe isiokwu isiokwu
Site na mpaghara SEO, a na-elekwasị anya keytail isiokwu na Key-kpọmkwem Keywords. Kama ịnwa ịhazi maka isiokwu "ndị dọkịta ezé," ya na mpaghara SEO ị ga-elekwasị anya "ndị dọkịta ezé na Seattle," nke na-agbanwe nha nha nke asọmpi na isiokwu isiokwu. Site na iji isiokwu na geo-kpọmkwem keywords ezubere iche, asọmpi isiokwu na-ebelata nke ukwuu, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịsọ mpi ma nweta ọkwa dị elu.
3. Ntụgharị ka mma
Akụkọ Microsoft na 2010 kwuru na ndị ọrụ ekwentị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa. N'afọ a, Nielsen kọrọ na ihe dịka 64% nke ọchụchọ ụlọ ahịa ama ama gbanwere n'ime otu awa. Isi ihe dị mkpa ebe a bụ na ndị ahụ niile bụ nyocha mpaghara maka ndepụta mpaghara. Ulo oru di n’ime na enweta onu ogugu ka mma site na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara. Nke a metụtara ọ bụghị naanị usoro okike ama kamakwa ngwaọrụ ọ bụla ndị mmadụ na-eji achọ Google maka ndepụta azụmahịa mpaghara.
Otu ihe dị mkpa ịmara bụ na egosiputa mgbanwe na-ada ngwa ngwa mgbe ibe na-ebu nwayọ; ndị ọrụ mkpanaka nwere obere ndidi maka ichere maka ebe nrụọrụ weebụ ga-ebu. CDN (netwọk nnyefe ọdịnaya) Bochum na-enye ihe ngwọta kachasị mma maka iwepụ peeji nke na-adụ nwayọ ngwa ngwa na ịme ka ọnụọgụ mgbanwe.
4. Ntawanye Nta
N'adịghị ka ọdịnala SEO, mpaghara SEO dị karịa maka ihe a na-akpọkarị "amaokwu" - njikọ na-enweghị njikọ nke aha aha gị, adreesị, na akara ekwentị gị, ihe atụ nke gụnyere ịdebanye aha na akwụkwọ ndekọ aha na ịnweta nyocha dị mma. Rowtụfu usoro ọdịnala SEO ole na ole dịka blog na ọtụtụ njikọ dị mma sitere na weebụsaịtị ndị e guzobere na-enyere aka n'ezie, mana ndị a bụ icing na achicha ahụ. Imirikiti njikarịcha - ihu na peeji na ibe - dị mfe na SEO mpaghara ma e jiri ya tụnyere ọdịnala SEO.
5. Ngwọta Ndị Mere Jikere
Nke a bụ ebe ọ na-akawanye mma. Dị ka ọrụ SEO ọdịnala, nke ọkachamara nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwaọrụ na akụrụngwa iji jikwaa usoro ahụ nke ọma, enwere ọrụ dịka Ihe nchoputa nke Whitespark, Yext (nke na-agbanwe ma na-ejikwa amaokwu gafee plethora nke akwụkwọ ndekọ aha), yana ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ iji nyere aka na mbọ SEO mpaghara.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO mpaghara na-eji ọrụ ndị a ewu ewu, na-aga nke ọma, na nke a nwalere oge, oge itinye ego iji nweta nsonaazụ na-erughị na ọdịnala SEO.
6. Nsonaazụ Ọsọ
Nsonaazụ na SEO enweghị ike ịkwado ya, mana ọtụtụ ndị na-ekiri ya kwenyere na mbọ SEO mpaghara na-enweta nsonaazụ ngwa ngwa. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụghị ọtụtụ weebụsaịtị (na azụmahịa ha) ghọtara uru nke ịnweta nsonaazụ ngwa ngwa maka mgbalị SEO ha: nke a pụtara n'ụzọ dị obere mmefu, n'ihi na oge bụ ego.
Imirikiti ụlọ ọrụ SEO dị iche iche na-aga n'ihu n'usoro njikarịcha ruo mgbe ha nwere nsonaazụ na-egosi iji gosi ndị ahịa ha. N'ikpeazụ, ha na-akwụ onye ahịa ụgwọ maka ihe karịrị ihe ọ kwesịrị ị nweta iji nweta nsonaazụ ndị ahụ. Ruo n'ókè dị ukwuu, enwere ike izere nke a na mpaghara SEO.
7. ROI na usoro na-aga n'ihu
N'adịghị ka ọdịnala SEO, mpaghara SEO nwere oke ROI. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ azụmaahịa mpaghara bụ ndị na-eweta ọrụ anụ ahụ, yana ndị na-achọ ọrụ na otu obodo nwere ike bụrụ ndị ahịa ngwa ngwa. Na obere asọmpi (n'ọtụtụ ọnọdụ), ohere ka mma ịdepụta na Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ, yana weebụsaịtị kachasị mma, azụmaahịa mpaghara nwere ike ibute ihe "ntụkwasị obi" ngwa ngwa.
Mpaghara SEO abụghị ohere nke ohere post-njikarịcha. Mmadu kwesiri ile anya mgbe niile na nhazi, bulie, ma megharia ufodu uzo, ma ihe ndi a adighi adighi ike karie ka ha choro na SEO.
Nweta ma ọ bụ ego bara uru maka SEO mpaghara
1. Google Adwords Keyword Ngwá Ọrụ
Enwere ike ịnwe ọfụma, ngwa ọrụ ọgaranya bara ụba karị, mana maka ebumnuche niile dị mkpa, nke Google Ngwá Ọrụ Ngwaahịa aza ọtụtụ isi isiokwu nnyocha mkpa. Ngwaọrụ a dịgasị iche ma kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ asọmpi dabere na ọnọdụ yana data ọchụchọ.
2. Ndepụta Akwụkwọ ndekọ aha na weebụsaịtị
E nwere ọtụtụ narị akwụkwọ ndekọ aha ebe ị nwere ike ịnweta "amaokwu," nke bụ ihe dị mkpa na ogo maka isiokwu-akọwapụta ọnọdụ. Ná ngwụsị afọ gara aga, Myles chịkọtara otu nnukwu ndepụta nke isi mmalite maka azụmaahịa US & UK. Otutu n'ime ya ka na-adi nma.
Cheta atọ n'ime otu SEO: Ebe Google, Mpaghara Bing, na Yahoo! Mpaghara. Weta ebe nrụọrụ weebụ gị na azụmahịa gị na nkọwa zuru ezu na nke ọ bụla n'ime ha. Wee tinye isi ederede maka usoro isi nri gị, ma ị nọkarị nke ọma.
3. Na amaokwu & Nyocha
Nchịkọta Google nke amaokwu abụrụla ihe ndabere maka ị nweta ọkwa dị elu. Agbanyeghị, nyocha na-arụ ọrụ dị mkpa. Weebụsaịtị dị ka Yelp na-ewu ewu dabere na njirisi nyocha. Ọtụtụ n'ime nsonaazụ maka isi okwu metụtara ọnọdụ sitere na Yelp ndepụta azụmaahịa mpaghara nwere ezigbo nyocha.
"Dọkịta ezé seattle" - Lelee nsonaazụ mbụ. O sitere na Yelp.
Google mara ihe. Ọ bụghị naanị na ọ na-agụ amaokwu kamakwa ọ makwa otu esi agụ nyocha nyocha. Ihe nyocha ndị ọzọ, ohere ka mma ị na-egosi n'elu.
Inweta nyocha esighi ike ma ọ bụrụ na i wepụta oge jụọ ndị ahịa gị gara aga na nke ugbu a, ndị enyi, yana ọbụlagodi ezinụlọ ịtụle ndepụta azụmahịa gị (na ọtụtụ weebụsaịtị dị ka o kwere mee). Ma n'ezie, ị chọghị ime nke a.
4. Na peeji nke njikarịcha
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ekwu nke a: Ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere adreesị anụ ahụ, tinye ya na ibe ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ gị (ọkacha mma dị n'okpuru). Mee adreesị ị na-eji na-agbanwe agbanwe gafee weebụsaịtị na ndekọ aha niile ị depụtara. Nọmba ekwentị dịkwa oké mkpa. Yext.com zuru oke iji hụ na agbanwe agbanwe gafee akwụkwọ ndekọ aha niile.
5 Media Social
Tinye na ezigbo ọgwụ nke mgbasa ozi mmekọrịta bụ otu n'ime ihe kachasị mma ị nwere ike ime maka mbọ SEO mpaghara gị. Mgbasa mgbasa ozi na-aghọwanye onye na-agbasi ike maka SEO yana ahịa, yabụ na nke a na nchịkọta SEO gị bụ ezigbo echiche.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị dabere na ndị ahịa mpaghara, mpaghara SEO bụ tiketi gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ dị elu na visibiliti na Google. Ọnụ ego ekwesịghị ịbụ nsogbu ịkwalite mbọ gị iji nweta ọkwa dị elu na Google - nke nwere ike ịbụ isi iyi ndị ahịa ọhụrụ na azụmaahịa ndị ọzọ.
Tags: nchọta mpagharaobodo seosearch engine njikarịcha
Jayson DeMers bụ nchoputa & CEO nke EmailAnalytics, ngwá ọrụ na-arụpụta ihe na-ejikọ na akaụntụ Gmail ma ọ bụ G Suite gị ma jiri anya gị hụ ọrụ email gị - ma ọ bụ nke ndị ọrụ gị. Soro ya gaa n'ihu Twitter or LinkedIn.
Jun 24, 2013 na 6:41 AM
Egosiputala uzo ime obodo ka uzo di nma ma di onu ahia. Daalụ maka ịkekọrịta….
Jun 24, 2013 na 7: 26 PM
Ozi dị egwu, Jayson!
Jun 25, 2013 na 12: 17 PM
ekele maka mmelite!
Jun 27, 2013 na 8: 47 PM
Eji m obi m niile na ndị nwe obere azụmaahịa niile kwesịrị itinye ego na ndepụta mpaghara, enwere ọtụtụ ngwa seo iji mee ihe ma ọ bụ na ị nwere ike ịpụpụ azụmaahịa gị nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta ntanetị n'ịntanetị.
Aug 27, 2013 na 7: 42 AM
Nke a ga enyere otutu aka ime ihe seo
Ọkt 7, 2013 na 7:58 AM
Echere m na SEO na Social Media Service bụ akụkụ dị mkpa nke Digital Marketing. Maka azụmahịa ọ bụla, anyị chọrọ ụdị ọrụ a maka ịkọ aha na nkwalite. Ndepụta mpaghara mpaghara Google bụkwa akụkụ dị mkpa maka ahịa mpaghara.
Kere Web Web
Dee 14, 2013 na 5: 08 AM
Otu n'ime usoro kachasị mma maka mpaghara mpaghara iji kwurịta okwu na obodo ọ bụla ọrụ ọ bụla.
Dec 2, 2015 na 1:47 PM
Nnukwu blog na “otu esi eme SEO mpaghara dị mma na mmefu ego”. Achọtara m ndụmọdụ ndị a bara uru nke ukwuu iji nyere aka bulie azụmaahịa mpaghara m site na iji SEO. Daalụ ọzọ! 🙂